Weerar ka dhacay Duleedka Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Weerar ka dhacay Duleedka Kismaayo
Tuuryare 28 April 2019
Wararka naga soo gaaraya Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in Ururka Al-Shabaab ay maanta barqadii weerar ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland ku leeyihiin deegaanka Baarka ee duleedka Kismaayo.
Weerarka kadib ayaa waxaa halkaasi ka dhacay dagaal culus oo dhexmaray ciidamada Jubbaland iyo Ururka Al-Shabaab, kaas oo khasaaro ay kasoo gaartay labada dhinac.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen inay iska difaaceen weerarka kaag yimid dhinaca Ururka Al-Shabaab,hayeeshee weli aan la ogeyn khasaaraha labada dhinac kasoo gaaray dagaalkaas.
Al-Shabaab ayaa Baraha internet-ka waxa ay ku qoreen in deegaanka Baarka Saldhigga Ciidamada Jubbaland ay dhowr jiho ka weerareen,waxaana sidoo kale dadka deegaanka ay sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa rasaasta dagaalka labada dhinac.
Wararkii u dambeeyey ee haatan naga soo gaaraya deegaanka Baarka ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Jubbaland ay wadaan dhaq dhaqaaqyo ciidan, iyaga oo isku fidiyey deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose.
Somali president accused of failing to secure Mogadishu
Kenyan forces hit by explosion in Mandera town